Mamiriro ezvinhu anosiririsa: Mumiriri weUN anokurudzira Cameroon kuti idzorere Internet munzvimbo dzinotaura Chirungu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cameroon Breaking News » Mamiriro ezvinhu anosiririsa: Mumiriri weUN anokurudzira Cameroon kuti idzorere Internet munzvimbo dzinotaura Chirungu
Kuputsa Kufamba Nhau • Cameroon Breaking News • nhau
Mumiriri akasarudzika weSecretary-General weCentral Africa, François Louncény Fall, akakurudzira nhasi zviremera zveCameroonia kuti zviongorore nekushingirira matambudziko evagari nevamabhizimusi venzvimbo dzinotaura Chirungu kuchamhembe kwakadziva kumadokero nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. kunyimwa Internet kubvira pakati paNdira 2017.
“Aya mamiriro anosiririsa. Asi ndine chokwadi chekuti chishandiso chakakosha chebudiriro, kutaurirana nekusimudzira pamwe chichave chichigadziriswa muCameroon, ”akadaro asati abva kuCameroon musi wa13 Kubvumbi mushure mekushanya kwemazuva mana.
Panguva yekushanya uku, VaFall, avo vanotungamirawo UN Regional Office yeCentral Africa (UNOCA), vakaongorora mamiriro ezvinhu uye vakaongorora zvakakonzerwa nezviito zvichangobva kuitwa neHurumende kugadzirisa zvichemo zvemagweta nevadzidzisi vanotaura Chirungu, UNOCA yakati mupepanhau.
"Ndakave nekudyidzana kune zvibereko uye netariro nevose vane chekuita," Mumiriri Anokosha akadaro pamusangano wevatori venhau muYaoundé musi wa12 Kubvumbi. Akasangana nevakuru veHurumende, nhengo dzemasangano akazvimirira, vatungamiriri vanopikisa, nhengo dzevamiriri pamwe nehurongwa hweUN.
Akasanganawo nevanhu vakasungwa uye vakasungwa maererano nemamiriro ezvinhu kuchamhembe kwakadziva kumadokero nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, kusanganisira Felix Nkongho Agbor Balla nemushamarari wenhepfenyuro Mancho Bibixy.
"Ndinokurudzira Hurumende yeCameroonia kutora matanho ese aanoona akakodzera, nekukasira uye mukati memutemo, kuitira kuti vagadzire mamiriro ezvinhu anovaka chivimbo chinodiwa kupedza dambudziko," akadaro Mr. Fall.
Nezve izvi mupfungwa, akasimbisa kuti "kutsvaga kwechokwadi uye kunovaka kutaurirana uchifunga nezve budiriro kwakakosha." Akawedzera kuti, pazvinenge zvakakodzera, UN inoramba yakagadzirira kuenderera mberi "kuperekedza simba iri kuitira kuti vabatsire kuzviremera nevavanoshanda navo mukutsvaga mvumo yekubvumirana uye isingagumi pamamiriro ezvinhu aya."
VaFall vakadzokorora kudana kweUN kumapato ese kuti vagadzirise mamiriro ezvinhu parunyararo nemutemo. Akagamuchira chinangwa cheHurumende chakaziviswa chekudzoreredza mabasa eInternet muBamenda kuzvipatara, mayunivhesiti nemabhangi, sechikamu chezviyero zvakaziviswa musi wa30 Kurume negurukota rezvemitemo.
Akakurudzira Hurumende kuti itarise dzimwe nzira dzekuvaka chivimbo kunyaradza kusagadzikana, kusanganisira kuburitswa kwevatungamiriri veAnglophone, uye kudzoreredza zvizere mabasa einternet mumatunhu maviri aya.
VaFall vakadanawo vatungamiriri vesangano reAnglophone kuti vataurirane neHurumende nenzira inovaka kuti vawane mhinduro inobvumirana uye isingaperi kumamiriro ezvinhu kumaodzanyemba-kumadokero nekuchamhembe-kumadokero matunhu. Akasimbisazve kuda kweUN kuti irambe ichiperekedza mapato maviri aya mukuyedza kwavo kutaurirana.
VaFall vachadzokera kuCameroon pachiitiko chemusangano wemakumi mana nematanhatu wemusangano weUN Standing Advisory Committee yeMibvunzo Yezvekuchengetedza muCentral Africa uye ndiko kupera kwaMay, kutanga kwaJune wegore rino.